राष्ट्रपतिका छोराविरुद्ध विमानस्थलमा नाराबाजी-‘पुराना पारस गए, नयाँ पारस आए’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← महिला कामदारका लागि विशेष प्याकेज
काठमाडौं, ७ कात्तिक, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोराले दादागिरी देखाएपछि सर्वसाधारणले आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नाराबाजी गरेका छन् । पुराना पारस गए, नयाँ पारस आए भन्दै सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिका छोरा चन्द्रमोहन यादवको गाडी धकेलिदिएपछि विमानस्थलमा केहीबेर तनाब पनि भयो ।
आइतबार बिहान १ बजे थाई एयरबाट एकजना मन्त्री र दुईजना सरकारी उच्च अधिकारी विदेश जाने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षाकर्मी व्यस्त थिए । यहीबीच भिआइपी क्षेत्र अगाडि पिक एन्ड ड्रप जोन (चढ्ने र ओर्लने क्षेत्र) मा निजी नम्बर प्लेटको स्यान्ट्रो कार पार्किङ गरिएको भेटिएपछि प्रहरी सोधखोजमा लाग्यो ।
गृहमन्त्री भीम रावल, रक्षा सचिव नवीन घिमिरे र नेपाली सेनाका उपरथी अनीलजंग पाण्डे थाई एयरको विमान चढ्न विमानस्थल आउने वेलासम्म पनि भिआइपी कक्ष अगाडिको क्षेत्र ‘क्लियर’ नभएपछि प्रहरी तनाबमा आएको थियो । बेवारिसेजस्तै छाडिएको गाडीमा विस्फोटक पनि हुन सक्ने चर्चा चलेपछि सर्वसाधारणको भीड पनि जम्मा भयो । तर, मन्त्री र उच्च अधिकारीका लागि बाटो प्रशस्त गर्न ट्राफिक प्रहरीले गाडी ठेलेर केही पर लगेको थियो ।
करिब ४५ मिनेटपछि १२ बजेतिर चालकसहित तीनजना बा७च ४२५६ नम्बरको सो कारमा फर्किए । उनीहरू कारमा चढ्नासाथ ट्राफिक असई धर्मराज घिमिरेले भिआइपी जोनमा कार किन पार्क गरेको भनेर लाइसेन्स मागे । तर, असई घिमिरेलाई कारको पछाडि बसेका यात्रुले अंग्रेजीमा थर्काउन थाले ।
‘हु आर यु टु आस्क अस फर लाइसेन्स, वी आर भिआइपिज्, जस्ट गेट लस्ट फ्रम हेयर’ (हाम्रो लाइसेन्स माग्ने तिमी को हौ ? हामी भिआइपी हौँ, तिमी यहाँबाट भाग) । कारभित्रबाट अंग्रेजीमा थर्काउन थालेपछि घिमिरे र अरू प्रहरी अलमल्ल परे । तर, स्यान्ट्रो कार चढेर विमानस्थल गएका भिआइपीसँग न सरकारी गाडी थियो, न कुनै सुरक्षाकर्मी ।
त्यहीबीचमा कारभित्रबाट प्रहरीलाई थर्काउने राष्ट्रपतिका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव हुन् भन्ने चर्चा चलेपछि अब के गर्ने भनेर प्रहरी झन् अलमल्ल पर्‍यो । तर, सर्वसाधारण भने नारा लगाउन थाले, ‘नयाँ पारस मुर्दावाद ।’ सर्वसाधारणले गाडी अगाडि बढाउन दिएनन्, बरु धकेलेर २५ मिटर पछाडि पुर्‍याइदिए । गाडी धकेल्दा कथित भिआइपीहरू आरामसँग बस्थे, प्रहरी नजिक गयो कि अंग्रेजीमा थर्काइहाल्थे ।
अंग्रेजी सुनेर अलमल्ल परेका प्रहरीले डिएसपी रामचन्द्र राईलाई बोलाए । तर, कारभित्र बसेका ‘भिआइपी’हरू बाहिर आउन पनि मानेनन्, लाइसेन्स दिन पनि मानेनन् । एकातिर सर्वसाधारण पुराना पारस गए, नयाँ पारस आए भन्दै आक्रोशित थिए, अर्कोतिर चालक लाइसेन्स नदिई गाडी अगाडि बढाउने कोसिसमा थिए । तर, चालकले गाडी अगाडि बढाउन पटक-पटक कोसिस गरे पनि सर्वसाधारणले बाटो रोकिरहे ।
यहीबीच डिएसपी राईले फेरि गाडीको झ्यालमा गएर अनुरोध गरे, ‘राष्ट्रपतिको आफन्त हो भने तपाइंहरूको पनि सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । तर, सर्वसाधारण आक्रोशित छन्, तपाईंले लाइसेन्स नदिएसम्म भीडले अघि बढ्न दिन्न । अपि्रय अवस्था आउनुअघि नै तपाइंहरूले लाइसेन्स दिएर सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’
डिएसपीको अनुरोधपछि चालकले लाइसेन्स दिए, सर्वसाधारणले पनि गाडी अघि बढाउन बाटो छाडिदिए । गाडि अघि बढ्यो, तर भित्रबाट अंग्रेजीमा आवाज आइरहेको थियो, ‘ह्वाट अ अनसिभिलाइज्ड सोसाइटी, नो रेस्पेक्ट फर इभन द भिआइपिज्’ (कस्तो असभ्य समाज, भिआइपीको पनि इज्जत छैन यहाँ) ।
सर्वसाधारणको दबाबमा प्रहरीले सपही, धनुषा निवासी सुशीलकुमार यादवको नाममा रहेको ०६२३८३६५ नम्बरको लाइसेन्स जफत गरेको थियो । तर, माथिको दबाबमा केहीबेरपछि नै फिर्ता दिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, लाइसेन्स जफत गर्ने प्रहरी टोलीको नेतृत्व गर्ने डिएसपी राईले भने आफूलाई यस’bout जानकारी नभएको बताए । ‘लाइसेन्स ट्राफिकले लगेको हो, पछि फिर्ता गर्‍यो कि गरेन, थाहा भएन,’ उनले भने ।
सरकारी गाडी र सुरक्षाकर्मीविना निजी कारमा डुलिरहेका ‘भिआइपी’ राष्ट्रपतिकी बुहारी रश्मी यादवलाई बिदा गर्न विमानस्थल गएका थिए । स्रोतका अनुसार रश्मी सिल्क एयरको १ः०५ को उडानबाट सिंगापुर हुदै अस्ट्रेलियातर्फ उडेकी छिन् ।